Guyyoota 100 Abiy: 'Kan haadhasaa kabajutu biyyasaa kabaja' - BBC News Afaan Oromoo
Guyyoota 100 Abiy: 'Kan haadhasaa kabajutu biyyasaa kabaja'
Haasawaa yeroo gara aangootti dhufan Mana Maree Bakka Bu'oota Uummataa Itoophiyaa duratti taasisaniin Dr. Abiyi Ahimad waa'ee dhimma dubartootaa kan duraan baratameerraa haala adda ta'een xiyyeeffannaa addaa itti kennanii dubbatan.
Dubbii isaanii keessatti fakkeenya qabatamaan haadha isaaniifi haadha-warraa isaanii kaasuun, dubartoonni biyya keessatti ga'een isaan qaban baayyee guddaa ta'uu ibsanii milkaa'inni dubartoota malee hiika akka hin qabne cimsanii dubbataniiru.
Jechoota hin dagatamne Ministirri Muummee erga gara aangootti dhufanii waa'ee dubartootaa taasisan namoonni jiruufi jireenya isaanii keessatti akka of ilaalan kan taasisudha.
'Guyyoota 100 milkaa'inoota 1001'
Ministira Muummeefi jijjiiramoota diinagdee mul'atan
"Dhiironni yeroo ol-aantummaasaanii dubartootarratti fe'an gar-tokkoo qaama isaanii qofa miti kutanii kan gatan, beekumsa isaanii awwaalan," jedhan Dr. Abiyyi yeroo ilaalcha hin taane dhiironni dubartoota irratti qabaatan dubbatan.
Xiyyeeffannaa Dr. Abiyyi dhimmi dubartootaaf taasisan aanga'oota biroorraa adda isaan taaasisa kan jechisiisu dubbiin humna-qabeessa dubbatan kan biraan dubarootaaf kabaja malu akka kennamu kan taasisudha.
"Obbolaawwan durbaa, haadhotii walumaa galatti ammoo dubartootaa kabajaan yoo fudhattan... yeroo sanatti guutummaan addunyaa galata qabaachuu keessan qalbeeffata."
"Guyyaa boombiin dhohe san halkan lama na dhukkube," jedhu abbaan MM Dr. Abiy Ahimad.
Haadhotiin jijjiirama guyyoota 100 Dr. Abiyyi Ahimad gara aangootti dhufe gaafataman keessaa jiraatuun Godina Shawaa Bahaa magaalaa Walanciitii Haannaa Boggaalee tokkodha. Daldala kuduraafi fuduraatiin bulti. "Ministirri Muummee hojii shaggaa hojjetaa jira. Ani hojii isaaniirratti kanan dabalu hin qabu. Rabbi qofaan isaaniin nuuf haa jiraachisu qofan jedha," jetti osooma gidduudhaan maamiltootashee keessumsiistuu.
Jechoota Dr. Abiiyyi keessaa haala kana dura hin baratamneen oolmaa haadhaafi haadha-warraa isaanii kaasan yaadatti Aadde Haannaan. 'Kan haadhasaa kabajuti biyyasaa kabaja' kan inni jedhe sirriitti kan dubartootaa irratti fuulleffateefi waanta nuti kanaan dura hin barredha jetti.
Aadde Alamii Hayilee jiraattuun Godina Shawaa Bahaas, jijjiirama akka naannoofi sadarkaa biyyaatti guyyoota 100 darban dhufeef galatan qaba jedhu.
Milkaa'insa argamaa jiru kanaaf ga'een qeerraa guddaadha kan jedhan Aadde Alamiin, haala rakkisaa keessa turre keessa darbamee Dr. Abiyyi gara aangootti dhufaniiru. Yeroo jalqaba gara aangootti dhufan waan dhugaa milkaa'inni argamu shakkanillee amma jijjiirama gaarii argaa jiraachuu ibsu.
"Oromoon akkuma duraanuu kabaja qabu sana, kabaja sana raggaasisee biyyattii kana biyya godhuu isaatiif baayyee itti gammadeera."
Waa'ee Seeraafi Sirna Gadaatiin buluullee waan dubbataniif natti toleera kan jedhan Aadde Alamiin, amma biyyattiin abbaa argatteetti, kaayyoofi qabsoon keenya galma ga'eera jedhu.
Waa'ee kabaja dubartootaaf Dr. Abiyyi kan haadha isaa kaasuun dubbatan Aadde Alamii gammachiiseera. "Akka itti haati isaa isa guddifte, naannoo itti guddate, akka itti isa barsiifteef haadha isaa kan duute galateeffachaa, keessattuu haadha haati Siiqqee waan taateef dhaamsa akkasii dhaga;uukoof nan galateeffadha."
Aadde Kibbinash Taaddasaa haadha qonnaan bulaa BBC'n dubbise turan. Jijiirama guyyoota 100 darban keessa argan akka hordofaa jiran dubbatu.
"Yeroo duraa Pirezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa agarre. Isaan booda Obbo Lammaa Magarsaa kan jechoonni isaanii hedduu namatti tolaniin gammadaa jirruu Dr. Abiyyi Ahimad ammoo Ministira Muummee nuuf ta'an. Isattis baayyee gammadaa jirra. Yoo fiixaan nuuf ba'eef Waaqarraa nuuf ergame jenna."
Hirmaannaan dubartootaa gara aangootti dhufanii guyyoota darban 100 keessa dabaleera
Jechoota Dr. Abiyyi dubbatan keessaa kan addatti yaadatan gaafatamanii, kan inni 'hin yeroo gabaasa hojii yeroo dhiyeessitan hin sobiinaa' jedhanii akeekachiisan. "'Isa lama ta'e sadii jettanii hin gabaasiinaa. Sobanii gabaasuun hannadha' jedhan.
"Ani yeroo hundaa jechoota isaa [Dr. Abiyyi] dhaga'uuf raadiyoorraa hin fagaadhu. Yeroon jechoota isaa dhaga'ummoo nama osoo hin taane Rabbituu natti dubbata natti fakkaata. Yeroo ollaan walitti dhufnee buna dhugnullee yeroo inni raadiyoo keessaa dubbatu namni biraan hin dubbatu," jedhu Aadde Kibbinash.
Turtii guyyoota 100 Dr. Abiyyi Ahimad Ministira Muummee ta'an darban kana keessattis lakkoofsi dubartootaa gara aangoo ol-aanaatti dhufanii kan yeroo kamiirra caalmaa agarsiiseera.
Dhaabbanni gargaarsaa Ameeriikaa Itoophiyaatti yaaddoon beelaa jiraachuu hime